ukuvavanywa kwale mihla-ukuvela kwendima ye-qa
Eyona Qa Uvavanyo lwale mihla -Ukuvela kweNdima yeQA
Uvavanyo lwale mihla -Ukuvela kweNdima yeQA
Uphuhliso lwesoftware luye lwavela kwimihla yokuwa kwamanzi, i-Agile kwaye ngoku i-DevOps. Ngokwendalo, ukuvavanywa njengoluleko kuye kwabona iinguqu ezimbalwa eziphambili ukulungiselela iindlela ezintsha zokusebenza kunye nokuhambisa isoftware.
Nangona kunjalo, kusekho ukungaqondani okukhulu kunye nembono engachanekanga ngendima yabavavanyi kunye nokuqinisekiswa komgangatho ngokubanzi.
Kule posi, sijonga ukuba uvavanyo luye lwavela njani, ngakumbi kule minyaka ilishumi idlulileyo, kwaye zeziphi iingcali zeQA ekufuneka zenziwe ukuze zihlale ngaphambi komdlalo.
Uvavanyo lunokufumana umdla ngakumbi!
Ngelixa imisebenzi yovavanyo lwesoftware itshintshile ukuziqhelanisa neendlela ezintsha zokusebenza, ndisabona uninzi lweembono ezindala kuvavanyo nakwindima yeQA.
Kuyakhathaza ukubona ukuba kusekho abantu abaninzi kumzi-mveliso we-IT ababona ii-QAs okanye iiTesters njengomba ophantsi. Abavavanyi bahlala bebonwa njengabavavanyi abasebenzayo abavavanya kuphela xa abaphuhlisi begqibile ukusebenza kwinqaku. 'Uqinisekiso loMgangatho' lubonwa njengovavanyo, ukufumanisa kunye nokunika ingxelo ngeebugs kunye nokunika ukukhanya okuluhlaza ukuze kukhululwe.
Eyona nto ikhathazayo kukuba le mbono yendima yeQA iphambili phakathi kwabavavanyi kunye neengcali zeQA ngokwazo.
Uvavanyo lweSoftware yesiNtu
Ngokwembali, ukuthatha ukhokelo kwizigaba zokugqibela zeprojekthi yempophoma, ukuvavanywa kuya kuhlala ngokuqinileyo ngasekunene kwephilojekhthi yobomi. Emva kwenkcazo yemfuno engaphambili, abavavanyi bayakuthatha i-baton kwiQela loPhuhliso xa kuvalwa isigaba sophuhliso kwaye baqhube ixesha elide, iincwadi zeempendulo zovavanyo, rhoqo ngesandla, kwaye bahlala ngamaqela athunyelwe kunye namaqela ee-SME.
Iimeko zovavanyo zazicwangciswe ngocoselelo kwangaphambi kwexesha, izikripthi zenziwa ziingcali, kwafunyanwa iziphene kwaye kwaxelwa, kwaye kwaqhutywa imijikelo yovavanyo kwaye yaphinda yenziwa de amanqanaba omgangatho achazwe kwangaphambili afezekiswa.
Eyona iqaphelekayo bekusoloko kukho ukwahlula okucacileyo phakathi kwabaphuhlisi kunye nabavavanyi, kungekho kungabikho koxanduva okanye imisebenzi. Ewe kunjalo, ngexesha lokwahlulahlula, iringi ebiyelweyo yovavanyo, imisebenzi yayijolise ekusebenzeni kwesoftware ngeyona njongo yokufumana kunye nokunika ingxelo ngeziphene.
I-QA kubudala be-Agile
Ukuvela kweendlela ze-agile kunye neendlela zokusebenza-ziye zaxuba imisebenzi yophuhliso kunye nokuvavanywa ukuya kuthi ga kwinqanaba lokuba kuvavanyo lwesoftware kungaselilo isigaba esizimeleyo. Endaweni yoko, ukuvavanywa kwaba ngumsebenzi ocacileyo ngexesha lokufaka iikhowudi kunye nophuhliso lwesoftware.
Ngamanye amaxesha, kuya kuba nzima ukubona umahluko phakathi 'kovavanyo' kunye 'nomakhi' njengoko umntu ngamnye eza kuba nakho ukwenza ngaphandle komthungo imisebenzi yomnye nomnye.
'Umgangatho' uyekile ukuba luxanduva lwabavavanyi kuphela kwaye waba luxanduva ekwabelwana ngalo kuwo wonke umntu obandakanyekayo ekuphuhliseni nasekuhambiseni imveliso.
Kunye nale nguqulelo kwavela utshintsho loxanduva lovavanyo ngasekhohlo kuphuhliso olusisiseko somgangatho wokubhaka kwasekuqaleni.
Ukugxila kususwe ekufumaneni iziphene kwisoftware eyenziweyo ukuthintela iziphene ekungeneni kwisoftware kwasekuqaleni.
Ngenjongo ekwabelwana ngayo yokuqinisekisa kungekuphela ukuba imveliso okanye inqaku liyasebenza kwaye lihlangabezana neemfuno, kodwa likwalungele injongo kwaye linikezela kwinqanaba eliphezulu lokoneliseka komsebenzisi.
Imingeni yokuvavanya i-Agile
Ukuzibandakanya kwabavavanyi kulungiso lwebali, uphononongo lwekhowudi yoontanga, ukuvavanywa kweeyunithi kunye nezenzo ezinje nge-TDD, i-BDD, kunye noVavanyo oluQhubekayo, ukuqinisekiswa kovavanyo kunye nomgangatho wawuphambili kwaye wawungenisiwe kuphuhliso.
Kodwa, ngelixa i-Agile ihamba umgama omde ukudibanisa imisebenzi kunye nezenzo zophuhliso kunye novavanyo, iqela elisebenzayo lalisathunyelwe. Imijelo emibini yomsebenzi (i-Dev & Ops) yayihlala ingazi nto ngomnye nomnye.
Ukuba kukho into engahambanga kakuhle kwimveliso, uphando luya kuthatha ixesha elide. Abaphuhlisi babengenangqondo yokuba isicelo sabo siqhuba njani kwimveliso kwithuba elide; kwakungekho kucaca okanye intsebenziswano phakathi kwala maqela mabini.
I-DevOps ibhekisa kwintsebenziswano yamaqela oPhuhliso kunye nokuSebenza kuyo yonke indalo yesoftware, ukuhanjiswa, ukugcinwa kunye nenkxaso. Ibhekisa kumanyano oluqhubekayo lobutyebi, iinkqubo kunye nemveliso uqobo.
I-DevOps yenza iindlela zokudityaniswa okuqhubekayo kunye nokuhanjiswa kwexabiso kumsebenzisi wokugqibela.
Intshukumo ye-DevOps iqhube umbono omtsha kuvavanyo kwaye yadala amathuba amatsha abavavanyi ngokwabo.
Kweli xesha litsha abavavanyi kufuneka balungelelaniswe nophuhliso kunye nokusebenza.
Uxolelo lovavanyo alusenamda kwimveliso kodwa kuvavanyo lwezixhobo apho imveliso iyenziwa khona ekugqibeleni.
Ukudityaniswa okuqhubekayo (i-CI), kunye noQeqesho oluQhubekayo (CD), kuye kwaba yinto esemgangathweni ekuphuhlisweni nasekuhanjisweni kwesoftware, kungoko ke uninzi lweenzame zokuvavanya ngoku zichithwa ekuqinisekiseni umbhobho we-CI / CD, okusingqongileyo kunye neziseko zophuhliso.
Lo ngumqolo oxhasa zombini ukukhula kunye nokuhanjiswa.
Ukuba ukuvavanywa kwezi kungakhathalelwanga, kunokubangela iimeko ezingazinzanga, umzamo omkhulu uchithwe kuphandwa ngemiba yeziseko zophuhliso ephindaphindiweyo kwaye, ekugqibeleni, umngcipheko omkhulu kuphuhliso kunye nokuhanjiswa ngokukhawuleza.
Uvavanyo lwale mihla-uPhuculo loMgangatho oluqhutywa
Nangona kuninzi okwenziweyo ukufaka umgangatho kuwo onke amabakala ophuhliso kwaye, ngenxa yoko, uvavanyo lunendawo ebanzi kakhulu, ndisakholelwa ukuba ii-QAs zichitha ixesha elininzi zikhangela imiba esebenzayo kwaye zijolise ekuqinisekisweni kwesoftware.
Uninzi lwe-QAs alukuqondi ukubaluleka kwendima yabo kunye nefuthe abanokuba nalo kuphuhliso nasekuhambiseni.
Ngaphandle kotshintsho olwenziweyo kuphuhliso kule minyaka ilishumi idlulileyo, ndiziva ngathi abavavanyi basayithatha imbono yakudala ngendima yabo, kwaye ke, bahlala bezinzile kwixesha lakudala lovavanyo.
Ukuvavanywa njengomsebenzi wobugcisa kunye nendima yomvavanyi sele iphantsi komlilo kangangexesha elithile ngokunyuka 'kovavanyo oluzenzekelayo'. Kwaye okunene, uninzi lweengcali zeshishini zisakholelwa ukuba indima yomvavanyi kukuvavanya nje isicelo esenziwe ngabaphuhlisi, zonke zinokuzenzekelayo.
Ukuba abaphuhlisi balunge ngakumbi kwaye banobuchule ngakumbi bokubhala ikhowudi efunekayo kuvavanyo oluzenzekelayo, ke yeyiphi imfuneko yokuba kubekho umvavanyi kwiqela konke konke?
Lixesha lokuba sitshintshe olo luvo. Kuya kufuneka sivume umahluko kwixabiso kunye nezakhono phakathi 'kovavanyo' kunye 'noqinisekiso lomgangatho' njengoko, apho uvavanyo kukuqinisekiswa kokusebenza kunye nokuqinisekiswa kwesoftware, ukuqinisekiswa komgangatho ayisiyonto inye. I-QA luthotho lweenkqubo, kubandakanya ukuvavanywa, kunye neendlela ezilungileyo zokuqinisekisa ukuba imveliso esemgangathweni ihanjiselwa abasebenzisi.
Kuya kufuneka silwele uphuhliso oluqhutywa ngumgangatho kwaye sijonge ubuchwephesha beQA njengoyena ndoqo kunye nomsebenzi ophambili kuphuhliso nasekuhanjisweni kwesoftware, kungoko Uvavanyo lwale mihla .
I-QA ngoku licandelo eliphambili lophuhliso ukusuka ekuqaleni ukuya ekugqibeleni ukusebenza kuyo yonke inkqubo. Kwaye, nangona intetho eqhelekileyo isithi wonke umntu okwinqanaba lokuhambisa unoxanduva lokuzisa imveliso esemgangathweni, ndiyakholelwa ngokuqinisekileyo ukuba luxanduva lweQA ukuqinisekisa ukuba iinkqubo ezisemgangathweni ziyathotyelwa liqela.
Ngubani iQA yale mihla
Apho umsebenzi wovavanyo wawusoloko ubonwa njengendlela yokufikelela kuphuhliso, ulawulo lweprojekthi okanye ezinye - zihlala zinengeniso - iinkalo, iQA entsha yindima yezakhono ezifuna ulwazi olupheleleyo lwezenzo zophuhliso.
Ifuna ukuqonda ngokubanzi ngemiceli mngeni yeendlela zokufaka iikhowudi, ukuxabisa iindlela zokuhambisa kunye nokusingqongileyo kunye nemigangatho yokusebenza kunye nokhuseleko, iindlela kunye nemiceli mngeni.
Le yindima ebunjiweyo ka-T kunye nezixhobo ezikwaziyo kungekuphela nje ukusebenzisa ubuchule bazo kunye namava ekunikezeleni ukhululo lwazo oluphambili, kodwa ukusebenzisa ulwazi olubanzi lomxholo kulwakhiwo kunye nophuhliso.
Ukuhlala embindini wayo nayiphi na iprojekthi, i-QA yanamhlanje kufuneka ibe nokuqonda okuhle koyilo, ukusebenza, ukhuseleko, kunye neminikelo yelifu, isandi sobuchwephesha kwaye unxanelwe ukufunda ubuchwepheshe obutsha ukuze uhlale emdlalweni.
Phawula:Enye indawo ekhula ngokukhawuleza ithandwa kakhulu kwaye ibalulekile kuvavanyo lomgangatho wedatha, kuvavanywa idatha enkulu, amachibi edatha kunye nendawo yokugcina idatha.
Lifikile ixesha lokutshintsha imbono yendima yeQA kunye nokuba ngabavavanyi benza ntoni. Oku kufuneka kuqala kubavavanyi ngokwabo. Indawo yokuqala kukukhathalela ngokunzulu umgangatho.
Abavavanyi abekho nje ukwenza uvavanyo olusebenzayo kunye nokunika ingxelo ngeebugs. Indima yeQA inkulu kakhulu kunaleyo. Sibekwa kwiprojekthi qinisekisa iinkqubo ezisemgangathweni .
Xa sivavanya ngokunzulu isicelo, kufuneka sibe nolwazi olusondeleyo malunga nayo yonke inkqubo kwaye hayi ukujonga nje isicelo njengebhokisi emnyama.
Ukuze sibe nalo olo lwazi lusenyongweni kufuneka sifunde ngokuqhubekekayo kwaye sihambisane neetekhnoloji ezintsha kunye neendlela zokusebenza. Okona kubalulekileyo kukuba ii-QAs kufuneka zilungelelaniswe.
Xa ii-QAs ziyiqonda injongo yazo kwiprojekthi kwaye ziqala ukukholelwa ukuba indima yazo sisiseko sophuhliso lwesoftware kunye nokuhanjiswa, xa samkela imigaqo-nkqubo yovavanyo lwangoku, kungoko kuphela apho sinokuthi siyitshintshe imbono yabanye.
I-samsung ye-galaxy s20 ityala
moto g5s dibanisa vs g5 dibanisa
Ngaba iwotshi yeapile iza itshaja
I-Samsung Galaxy S6 yahluthwa ngaphandle, kwaye ukubuyisela ibhetri yayo ayisiyiyo eyentliziyo etyhafileyo